Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari 1.23.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.23.1 လြန္ခဲ့ေသာ4မိနစ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari
Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တက် Saddle နှင့် Stampeders-iest critters အတူ Savannah ၏ဤဘေးထွက် wrassle ဖို့အဆင်သင့်ရ။ ခြင်္သေ့နှင့်ကျားနှင့်ဝက်ဝံကဒီကောင်ဘွိုင်ပွဲကြယ်ပွင့်မယှဉ်ပြိုင်ကစားကြသည်။ ကျွဲ, ဆင်, ငှက်ကုလားအုတ်နှင့်ပိုပြီး stampeding ၏ကျောကနေ, Lasso နှင့်ဆယ်ဂါလံဦးထုပ်လွှဲနှင့်အတူလက်နက်ပါ။ ဤအ bucking သောတိရစ္ဆာန်ပေါ်ကနေတင်းကျပ်စွာကိုင်ထားနှင့်သင်ရုံသူတို့၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Stampeders ကျော်ဖွင့်သောအခါ, တိရစ္ဆာန်ရုံကစတင်ခဲ့သည်! သင့်ရဲ့လေးခြေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပူးတွဲဖြည့်ပါနှင့်သင့်နာယကအံ့သြစရာအတွက်ကြည့်ကြကုန်အံ့။ ဒါဟာသင်လက်လွတ်ချင်မည်မဟုတ်ကြောင်းဦးတည်းရိုင်းစီးနင်းဖြစ်ပါသည် - YEEHAW
Dodge နှင့်မြင့်မားသောရမှတ်များအဘို့သင့် Chase အတွက်အတားအဆီးကိုရှောင်ရှား
သင့်ရဲ့က Sky တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာချွတ်ပြသနိုင်ဖို့အားလုံးပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစား၏တိရိစ္ဆာန်များကိုဖမ်းခြင်းနှင့်မိတ်ဖွဲ့ဖို့
ဧည့်သည်များအနေဖြင့်ကြီးမားသောဆုလာဘ်ဝင်ငွေရန်သင့်တိရစ္ဆာန်ရုံ Expand နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်
ရိုင်းအဆုံးမဲ့ Runner စွန့်စားမှု
Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 1.32k 1.04M
Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.23.1
ထုတ်လုပ်သူ Yodo1 Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://static.yodo1api.com/privacypolicy/en/privacypolicy.html
App Name: Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari
File Size: 207.08MB
Release date: 2019-07-17 22:02:47
လက်မှတ် SHA1: 3F:3A:A5:9F:61:73:E4:89:FA:50:3D:AE:FB:84:B2:8F:FD:F2:AA:13
ထုတ်လုပ်သူ (CN): yodo1
အဖွဲ့အစည်း (O): beijing
နိုင်ငံ (C): 100022
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): chaoyang
Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ